Mizzima TV Weekly, Business News No . 11 (Sat 16 March , 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No . 11 (Sat 16 March , 2013)
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း (၁၁)
အခု ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေထဲမှာတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရေးအတွက် မြန်မာလူငယ်တွေ ဘယ်လိုဆန္ဒရှိနေပြီလဲ၊ အတက်အကျမြန်မြန်နဲ့ ဈေးကစားခံနေရတဲ့ မတ်ပဲဈေးကွက်အကြောင်း၊ ပုလဲသွယ် စပါးတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးဘို့ အစိုးရက ဆုငွေထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးရ စီးပွားရေးသတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။